Yintoni ebaluleke kakhulu kubambisene, ingqondo yengqondo
Iingcebiso zeengqondo zengqondo okanye iimpawu zakhe ezintle, ezingabonakaliyo zibaluleke kakhulu. Ngamanye amaxesha izibini zididekile kubudlelwane babo ekugqibeleni bagqiba ekubeni baye kwizengqondo zentsapho. Kancinci, igama ngegama, lityhila inyaniso ukuba into ephambili ebantwini kubudlelwane, isazi sengqondo sikhombisa indlela ezinye iintlobo zobudlelwane eziphila ngayo ngenkulungwane yokugqibela.
Amadoda kufuneka aqikelele ukuba sinokubambisana nabo. Yintoni ebalulekileyo ekubambisaneni yesazi sengqondo.
Kwakusetyenziselwa ukuba yi-serfs kunye nabasetyhini - kungaphezu kwama-serfs. Ngoku sivunyelwe ukuba neengcamango zethu, kwaye ngokubaluleke kakhulu, sisoloko sinemisebenzi yethu, ngaphandle kwalawo esidlalayo kwintsapho. Akunjalo nje ngamama kunye nabafazi, kodwa nabaqeqeshi beklasi ephakamileyo okanye nje - umphefumlo weofisi :) Unamandla kwaye unobuthakathaka, unobumnene kwaye unesibindi - kodwa uhlala uzimeleyo, unako ukusinda ngaphandle komntu, ukuba akukho zikhetho, ngaphandle kobukhoboka basekhaya kunye noxinzelelo .
Ubuphi ubudlelwane "obungabambisani" obuvela kuyo?
Iingcali zengqondo ziyazi ukuba ukuzalwa emva kwemfazwe yamadoda yenye yeyona nto inzima kakhulu. Abalimi basoloko bambalwa, babe nexabiso elikhethekileyo. Oku kubonakaliswe ngokukodwa kubantwana, ngokuzungezwe ngokunyamekelwa ngumama. Yiloo ndlela abafazi abadla ngayo "kumama-ntombi".
Ewe, kwaye kusekho imibono emibi kakhulu - nokuba ngumyeni-ubaba, i-getter, umcebisi, owenza yonke imibuzo, okanye unyana-mntombazana, omele ahlambuluke-afundiswe, aze afundiswe ukuze enze umyalelo.
Kule meko, bobabini kunye nabanye abafazi bayakhuthazwa ngokunyanisekileyo ukuba babe kwiindima zesibini okanye zokuqala. "Abagqithisileyo" bayabavelisa kwaye bawaqonde. Khumbula ukuba kaninzi kangakanani uvile inqaku elithi "Ndinabantwana ababini - indoda nendodana." Ewe, akapheki i-pelmeni kwaye akahlambi iingubo zakhe?
Kwaye bayabonelela "iintombi zasekhaya" baze bazibeke njengomzekelo - apha, bathi, le ntombazana! Iminyaka engamashumi amabini kwaye engazi apho ukuhlawula indlu! Musa ukuthetha ukuba kulula kubayeni babo. Kwaye "xa kwenzeka" umfazi akayena mnye - uqobo uphonswa kwicala lobomi.
Indlela yokwakha ubuhlobo obuphilileyo, obuqinileyo nobunamhlanje?
O, intsebenziswano, ngakumbi kwiimeko zethu - yinto yobugcisa bonke. Umbongo, ukuchaneka. Kwaye, ngokukhawuleza, umfazi "uyabona", ufuna "intembeko ethembekileyo" okanye nokuba ngumsebenzi olwahluleleneyo. Kwaye apha-"umyeni wendlu uhlala, udlala igitare ...", njengokwakheka kwe-satirist Zhvanetsky ...
Yintoni ebaluleke kakhulu kubambiswano, isazi sengqondo siya kuthi kwangoko. Kukho imilinganiselo embalwa echaza ukuba luhlobo lolwalamano. Yaye into yokuqala efika engqondweni - ukulingana ngokupheleleyo - ngelanga, ayihambelani ngokugqibeleleyo. Ukulingana "kuyo yonke into" yinkqubo yokulwa nobudlelwano bobambiswano. Kodwa ukuzalisana, ukuxhasana, ukuxhasana kunye nokuqonda kukubaluleke kakhulu kwiintsebenziswano phakathi kwentsapho.
Asilingani kwaye alingana
Ngelishwa, ukuba uchaze ukuba into ephambili ngokubambisana, iingqondo zeengqondo ziphazamisa ... ubufazi. Xa kwakhiwa umfazi onxulumene naye, wadlala indima, kwaye uMoor owenza umsebenzi, unokushiya. Kuba endaweni yokulingana kuvela uhlobo lokuhlekisa - ukukhenkca ingubo kunye "nokulinganisa" impumelelo.
Kodwa amadoda alo "entanyeni" ngokwaneleyo emsebenzini! Kwaye apha ekhaya-efanayo!
Amadoda nabasetyhini bahluke ngokupheleleyo. Bathetha ngeendlela ezahlukeneyo kunye neenjongo ezahlukeneyo. Kwaye ukuhlukana "kwimida" eyahlukileyo ayinangqiqo, ekubeni sithetha ngolu hlobo lweprojekthi jikelele, kwaye nangakumbi-intsapho. Ngoko ke, into ephambili ngokubambisana - musa ukuya kwingcali yeengqondo-yoluntu.
Ubambiswano ludibene nomgomo oqhelekileyo. Nangona ibhinqa lihleli kummiselo kunye nabantwana abathathu, kwaye umyeni wakhe uyabafumana bonke. Ukwahlwaywa "mna, wena, oglovodov, ukondla" akufanele ukuba - ukuba kuphela isigqibo sokufumana isithathu sinobudlelwane kunye nengqiqo.
Ukususela nganye ngokwezinto zakhe zobuchule ...
Iphuzu elilandelayo elibalulekileyo likwahlula uxanduva. Emva kokuqonda ukuhlukana kobulili (uyaqonda imephu, yena-kunye ne-snack endleleni) uya kubelana ngengqondo. Emva kwakho konke, awufuni ukufumana kwindawo yokucima iiplati enye ezingasatshitshiweyo - ngamnye kumntu kunye nomntwana omncinci ...
Ukwabelana ngokufanelekileyo ngemfanelo, kufuneka uqonde ngokucacileyo ngubani owenza okungcono, onokwenqwenela. Mhlawumbi umfazi, ngubani (kwakhona, ucinga) uhlala kwindawo yokubeleka, uphumelele kakhulu kwimigaqo yokudala. Kwaye ukumphazamisa ekubhaliseni i-dollar yezigidigidi zeHarry Potter ayinangqiqo.
Okanye ufuna ukuba indoda yakhe ibethe iipatethi imihla ngemihla, ukuba ithatha "umsebenzi wesikolo" ukusuka emsebenzini - kuba ngomso "unokudlala" kwaye ingenise imali kumntu ococekileyo omnye.
"Ukunyathela" umsebenzi obuncinci ukusuka kwinqanaba lokugqibela lomsebenzi wethu, kuya kufuneka sifunde ukuvalelana. Musa ukuphulaphula kuphela ekupheleni kosuku - kodwa ngeemibuzo ngqo okanye ngqo ukuba ufumane oko umlingane wakho akufunayo. Ukuze ukwazi ukuziveza.
Kwaye ukuba le "ukubethelwa" kunye nokungqubuzana okungenakukupheka kwezinto ezingafunekiyo kungaguqukanga, kufuneka kuthukume. Ngethuba lokuzibamba kunye - nangona iimvakalelo zibetha phezu komda - kwaye ungenzi buhlungu nakakhulu, kodwa phulaphula.
Ukuba kuyimfuneko - ukuthobela. Ukuba kunceda, gxi ninisa. Ukungathinti okanye ukuthuka iqabane.
Ngamnye wethu ngumntu!
Yaye yile nxalenye ekhohliweyo kwintsapho. Bonke basondelene kakhulu, baqhelanise kwaye bayazi kakuhle - kuyo yonke imolenze yokugqibela ngakwindawo ekhohlo, enzima ukuyithatha. Sasibonisana kuzo zonke iintlobo-kwiimeko zokugula kunye nempilo, sabona iimpazamo zomnye kunye, ke, siyaqonda ukuba thina ngokwethu asikho isono ...
Ubunzima, amaqhinga, iinkqubo ezisisiseko kunye nendlela yokuphila-konke oku kunokukunqanda ukuba ungaboni komnye umntu onobumba obuninzi. Ngoko, ukuthintela ukuthatha ngokungathí sina, njengomlingani opheleleyo kunye alinganayo. Maye owaziyo ukuba aqonde njani xa ihembe lakhe lixesha lokuhlamba ...
Kulula kangakanani ukuphatha abantu
Yintoni enokubangela ukuphelelana kwamabhinqa
Umbala wohlobo lwakho lubomvu, luphuzi, njl.
Iidlo ezidumileyo kunye ezifanelekileyo
USergei Bezrukov waziqhayisa ngesibingelelo sokuzalwa esingavamile
Njani kunye nento yokuhlamba i-microwave ngokuchanekileyo
Isikhumba sibangela intloko
Umtshato wesibini: umntu unokutshintsha ekuzalweni komntwana?
I-Papaya Salad kunye nePeanuts
Indlela yokwenza umtshato wakho uphumelele
Isaladi kunye nenkukhu, i-walnuts kunye nama-mushroom amaqanda. Iresiphi yoNyaka omtsha
I-Chocolate Fudge (umkhuhlane)
Ihlala ikwazi ukujonga: imbonakalo yeendlela ezifanelekileyo kakhulu zeengqayi zamabhinqa zonyaka